रोनाल्डोले नयाँ क्लबमा कति नम्बर जर्सी पाए ? – Everest Dainik – News from Nepal
रोनाल्डोले नयाँ क्लबमा कति नम्बर जर्सी पाए ?
असार ३० । केही दिन अघि मात्रै रियल मड्रिड छोडेका क्रिस्टियानो रोनाल्डोको चर्चा चुलिएकै छ । अहिले नयाँ क्लबले प्रदान गर्ने सुविधादेखि विभिन्न विषय झनै रोचक भएका छन् । यउटा रोचक अर्को कुरा छ । त्यो हो उनले नयाँ क्लबमा पाउने जर्सी ! कति नम्बर जर्सी पाए होलान् रोनाल्डोले ? यो प्रश्नको जवाफ आइसकेको छ । अब उनले नयाँ इटालिएन क्लब युभेन्टसमा ७ नम्बर जर्सी पाएका छन् ।
बिहिबार आयोजित एक कार्यक्रममा क्लबका मिडफिल्डर जुवान कुआर्डाडोले रोनाल्डोलाई ७ नम्बरको जर्सी हस्तान्तरण गरेका हुन्। इङ्लिस क्लब चेल्सीबाट युभेन्टस आएका कुआर्डाडोले ७ नम्बरको जर्सी लगाएर खेल्ने भनेका थिए। तर रोनाल्डो क्लबमा भित्रिएपछि उनले अफिसियल्ली रूपमा ७ नम्बरको जर्सी रोनाल्डोलाई दिएका हुन्। हालैमात्र विश्वकपमा सहभागि भएर फर्किएका कुआर्डाडोको टोली कोलम्बिया नकआउट चरणमा पराजित भयो।
रोनाल्डोको ठाउँमा हाजार्डलाई ल्याउने रियलको तयारी!
नेइमारले रियल मड्रिड आउने चाहना राखेका हुन् ? मड्रिडको विचार यस्तो छ
रोनाल्डोको टोली पोर्चुगल पनि जारी रसिया विश्वकपको पहिलो अन्तिम १६ को खेलमा उरुग्वेसँग २-१ ले पराजित हुँदै प्रतियोगिताबाट बाहिरिएको थियो। रोनाल्डो १०० मिलियन पाउण्डमा स्पेसिन क्लब रियल मड्रिडबाट इटालियन क्लब युभेन्टस आएका छन्।
योसँगै पोर्चुगिज स्टार रोनाल्डो इतिहासकै चौथो महंगा फुटबल खेलाडी बनेका हुन्। बार्सिलोनाबाट नेइमारलाई तथा मोनाकोबाट किलियन एम्बाप्पेलाई भित्र्याउँदा फ्रेन्च क्लब पेरिस सेन्ट जर्मेइनले कीर्तिमानी रकम तिरेको थियो। नेइमारका लागि २०० मिलियन पाउण्ड तथा एम्बाप्पेका लागि १६६ मिलियन पाउण्ड तिरेरे प्रान्सेली क्लब पीएसजीले क्लबमा भित्र्याएको थियो।
त्यस्तै लिभरपुलबाट ब्राजिलियन मिडफिल्डर फिलिप कोटिन्होलाई बार्सिलोनाले भित्र्याउँदा १४२ मिलियन पाउण्ड तिरेको थियो। रोनाल्डोले साताको पाँच लाख पाउण्ड पारिश्रमिक पाउने गरी युभेन्टससँग सम्झौता गरेका हुन्। ३३ वर्षीय पोर्चुगिज स्टार रोनाल्डोले सन् २००८, २०१३, २०१४, २०१६ तथा २०१७ मा गरी पाँच पल्ट बलोन डी ओर अवार्ड जितेका छन् ।
रियल मड्रिडका लागि सबैभन्दा बढी गोल गर्ने खेलाडीसमेत रहेका उनले चार सय ५१ गोल गरेका छन्। यस्तै चार पटक च्याम्पियन्स लिगको उपाधि जिताएका रोनाल्डोले गएको मे महिनामा पछिल्लो संस्करणको उपाधि जिताए।
पोर्चुगलका यी स्ट्राईकरले ७ नम्बरको जर्सी लगाएर खेल्ने गरेका छन्। अब अगष्ट ४ मा रोनाल्डोको नयाँ टिम युभेन्टसले उनको पुरानो क्लब रियलसँग अमेरिकामा इन्टरनेसनल च्याम्पियन्स कपमा प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। -एजेन्सी
ट्याग्स: Crishtiano Ronaldo, क्रिस्टियानो रोनाल्डो
भाजपाको अध्यक्ष बने जेपी नड्डा